Akụkọ - nkuzi mgbatị ahụ Dumbbell
1. Mgbasa ozi na -aga n'ihu: ọkachasị na -eme ọkpụrụkpụ akwara pectoralis na uzo obi.
Omume: dumbbells n'aka gị abụọ dina na bench gị, dumbbells dị n'ubu gị, ọbụ aka na -eche ihu, kpalie dumbbells ahụ ruo mgbe aka gị kwụ ọtọ, kwụsịtụ, jiri nwayọ laghachi n'ọkwá ahụ. , na -enye ohere mgbatị zuru oke na mgbatị zuru oke nke pectoralis isi.
2. Ntughari oblique dị elu: tumadi na akwara obi.
Omume: isi ihe a na -eme bụ otu ihe a na -emegharị, ihe dị iche bụ na a na -edozi elu oche ka ọ nwee mmasị 30 ~ 40, dina na ya ime.
3. Nnụnụ na -emegharị ahụ: tumadi na -eme oghere dị n'etiti.
Omume: dinara na bench, dumbbells abụọ, ọbụ aka na -eche ihu, ogwe aka abụọ na -agbatịkarị n'elu igbe ahụ, ogwe aka abụọ na -ehulata ikpere aka n'akụkụ abụọ nke dumbbells arc gbada ruo na nke kacha ala, akwara akwara gbatịrị agbatị, akwara obi na -amanye mgbatị nke ogwe aka arc elu iji weghachi.
Nke abụọ: ubu
1. Nkwanye: tumadi mee mgbatị ahụ ihu, etiti na azụ.
Omume: ịnọdụ ala, dumbbells abụọ n'akụkụ ahụ, ikpere aka abụọ pụta, nkwụ n'ihu, na arc iji mee ka dumbbells ruo ebe kachasị elu, kwụsịtụ nwa oge, jiri nwayọ chịkwaa dumbbells dị ka ụzọ mbụ (arc). Ntuziaka: Ị nwekwara ike ịme ya ka ọ guzoro, jiri aka abụọ n'otu oge, ma ọ bụ jiri otu aka n'aka.
2. Mbuli elu ihu: ọkachasị na -eme trato deltoid n'etiti.
Omume: Kpọgide abụọ dumbbells n'ihu ụkwụ gị, dabere ntakịrị, tụgharịa ikpere gị, ma bulie dumbbells n'akụkụ gị ruo ogologo ubu. Tinye mọzụlụ deltoid n'ọnọdụ “mkpi kacha elu”. Kwụsịtụ, wee jiri nwayọ laghachi na njikwa ubu. Enwere ike iji otu ogwe aka, ntụgharị aka abụọ mee ya.
3. Bend side lifting: tumadi na -eme mgbatị azụ azụ.
Omume: Jide mgbịrịgba abụọ, ọbụ aka na -eche ibe ha ihu, gbuo ikpere n'ala, kwụsie ike, ogwe aka ruo n'akụkụ, wee chịkwaa nloghachi nwayọ.
Jirinụ n'ubu: Lekwasị anya na akwara trapezius.
Omume: Jide ma dumbbells n'akụkụ gị, gbuo ikpere gị ntakịrị, tọọ akụkụ ahụ gị elu n'ihu, bulie ubu gị elu, gbalịa imetụ ihe ntị ntị aka, kwụsịtụ nwa oge, wee jiri nwayọ jikwaa ma weghachi.
Na -agbagharị na ogwe aka abụọ agbagọ: Ọ na -elekwasị anya na latissimus dorsi.
Omume: gbuo ikpere gị ntakịrị, jide dumbbell n'aka abụọ, kwụgide n'ihu na ala nke ahụ gị, ma jiri ike mgbachi latissimus dorsi bulie dumbbell ahụ n'ikpere aka na ịdị elu ubu ma ọ bụ dịtụ elu karịa ọnọdụ ubu, kwụsị nwa oge, wee jiri ọgbaghara latissimus dorsi jikwaa dumbbell iji jiri nwayọ weghachi. E kwesịghị ibuli akụkụ ahụ elu elu iji zere ike ibiri ego.
2. Otu ogwe aka na-ehulata: Karịsịa na azụ azụ na azụ ala.
Omume: Jide ogwe aka na nkwụ na -eche ihu n'ime, n'aka nke ọzọ na -akwado arịlịka n'ikpere ụkwụ otu ụkwụ ahụ iji mee ka ahụ kwụsie ike. Welie dumbbell n'úkwù (mgbachi azụ azụ zuru ezu), kwụsịtụ nwa oge, wee mee ihe a na -achịkwa. nloghachi nwayọ (gbatịa azụ zuru ezu), wee gbanwee site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ.
3. Ụkwụ kwụ ọtọ: Gbado anya na azụ ala, gluteus maximus, na biceps femoris.
Omume: jide dumbbells n'aka abụọ ma kpọgide n'ihu ahụ, ụkwụ mepere emepe mepere emepe, obosara ubu, ụkwụ kwụ ọtọ, azụ kwụ ọtọ, ahụ n'ihu, isi elu, ruo mgbe akụkụ ahụ dị elu yiri ihe yiri ala. nkwekọrịta ma na -amanye ahụ elu azụ.